Ogaden News Agency (ONA) – Khilaafkii Maraykanka & Ruushka U Dhexeeyay oo Sare Usii Kacaya.
Khilaafkii Maraykanka & Ruushka U Dhexeeyay oo Sare Usii Kacaya.
Xukuumada Maraykanka ayaa shaacisay inay tarxiilayso 35 Diblomaasi oo Ruush ah kuwaasi oo loo qabtay muddo 72 saacadood ah inay isaga baxaan Wadanka Maraykanka.
Diblumaasiyiintan ayaa ku sugan Gobolada Washington iyo California, ayaa sidoo kale lagu amray inay horey usii kaxeystaan Qoysaskooda oo la noolaa. Saraakiishan Ruushka ayaa la sheegayaa inay u badan yihiin kuwa u adeega sirdoonka Ruushka. Xukuumada Maraykanka ayaa dhinaca kale cunaqabateyn saartay 9 hay’ adood oo ay ku jiraan hay’ adaha sirdoonka iyo militariga Ruushka.
Sidoo kale waxaa iridaha loo laabay labo guri oo ay dowlada Ruushka ku lahayd gobalada New York iyo Virginia ee dalka Maraykanka oo hoy u ahaa diblumaasiyiinta ka shaqeeya Safaarada Washington ee Ruushka iyo Xarunta Qaramada Midoobay.
Wadanka Ruushka ayaa jawaab deg deg ah ka bixiyey go’ aanka Maraykanka, waxayna shalay Jumcihii ku dhawaaqeen in ay iyaguna dhankooda Tarxiilayaan 35 Diblumaasi oo Maraykan ah oo ku sugan Safaarada iyo Qunsuliyada ay ku leeyihiin Ruushka.
Wasiirka Arrimaha Dibada ee Ruushka Sergie Lavrov oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in aysan waxna ka jirin in Ruushka uu wax lug ah ku lahaa faro-gelinta doorashooyinkii ka dhacay dalka Maraykanka, arrintaasi oo uu sheegay inaan wax cadeyn ah loo heynin.
Mr. Lavrov ayaa sheegay in talada ah tarxiilada Diblomasiyiinta Maraykanka ay u gudbiyeen Madaxtooyada Mascow si uu u ansixiyo Madaxweyne Putin. Ruushka ayaa sidoo kale sheegay inay jawaab ka bixin doonaan Cunaqabateyn kasta oo uu Maraykanka saaro hay’ adahooda iyo shirkadaha kasoo jeeda dalkooda, walow aysan weli faah faahin ka bixin.